Lanonam-panokafana ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany teny amin'ny Antenimieram-pirenena sy Antenimierandoholona | Primature
Antanananarivo, 26 febroary 2018 – Nanome voninahitra ny fanokafana ny fivoriana tsy ara-potoana voalohany teny amin’ny amin’ny Antenimierampirenena sy Antenimierandoholona ny Praiminisitra Lehiben’ny Governemanta Mahafaly Solonandrasana Olivier sy ireo mpikambana ao amin’ny Governemanta. Fivoriana tsy ara-potoana izay handinihana volavolan-dalàna fehizoro sy volavolan-dalàna tsotra.
Raha nanontanian’ny mpanao gazety ny Praiminisitra mahakasika ireo volavolan-dalàna, dia nanambara izy fa “misava izao ny ahiahin’ny maro satria tafapetraka eto anivon’ny Antenimerampirenena sy Antenimierandoholona ireo rijan-teny mahakasika ny lalàna mifehy ny fifidianana. Araky ny tenin’ny Filoham-pirenena dia tsy lalàna notefitefena fotsiny izy io. Tsy natao hamalifaliana antokon’olona na sokajin’olona vitsivitsy fa lalàna izay natao haharitra, lalàna izay mikatsaka ny tombotsoa ambonin’ny firenena. Mazava ny anton’izay, satria lalàna niainga tamin’ny hetahetan’ireo sokajin’olona izay mandrafitra ity firenena ity, ao ireo mpanao politika, ny fiarahamonim-pirenena, ny olon-tsotra, ary ny antokom-pivavahana”.
Nanamafy hatrany ny Lehiben’ny Governemanta fa “misy fomba fandrafetana azy ho rijan-tenin-dalàna fa tsy hataotao foana, ka nojerena izay fanao maneran-tany na “standards internationaux”, tsy maintsy nojerena ihany koa izay zava-misy eo anivon’i Afrika “au niveau regional”, tsy maintsy nojerena ihany koa indrindra indrindra ny “soatoavina Malagasy”. Tokony hitondra fitoniana eto amin’ny firenena amin’izay ny fandrafetana io lalàna io. Mazava ho azy fa hisy ny ady hevitra eo anivon’ny Antenimiera roa tonta, saingy hasaina ireo solombavambahoaka sy loholona mba hikatsaka hatrany ny tombotsoa ambonin’ny firenena amin’ny fanitsiana izay entina sy soson-kevitra mahakasika ireo rijan-tenin-dalàna mifehy ny fifidianana”.
projet_de_loi relatif au regime general des elections et des referendums
projet de loi organique relative a l’election de députés à l’AN
← Visite d’adieu de l’Ambassadeur du Vietnam à Mahazoarivo
Télécharger les trois projets de lois organiques relatives aux élections →